फ्रान्स को सीमा शुल्क | यात्रा समाचार
मरियम | | संस्कृति, फ्रान्स
जब हामी यात्राको तयारी गर्छौं त्यहाँ हामीले धेरै कुरा सोच्न पर्दछौं जुन सबै योजना अनुसार हुन्छ: विमान टिकट, होटल आरक्षण, संग्रहालय र स्मारकहरूको टिकट खरीद, यात्राको क्रममा ... यद्यपि, हामीले गाह्रो रूपमा ध्यान दिएका मुद्दाहरू मध्ये एक हामीले भ्रमण गर्न लागेका ठाउँको चलनहरू जान्नु हो। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि हामी असजिलो क्षणहरू बाँच्न चाहँदैनौं।
जे होस् फ्रान्स एक युरोपेली देश हो, र यो हामीसँग धेरै नजिक छ, यसको आफ्नै चलनहरू छ जुन छोटो भेटको लागि वा लामो मौसमको लागि सम्झनु पर्छ। यहाँ हामी धेरै रोचक फ्रान्सेली चलनहरूमा जान्छौं। तपाईं हामी संग आउन सक्नुहुन्छ?
4 सीधै यसो नगर्नुहोस् कि केहि तपाईंको रुचिमा छैन
5 भ्रमणको घोषणा गर्नुहोस्
6 खाना समय
9 मासूमहरुको दिन
10 पेटानक खेल्नुहोस्
11 लामो जीवन बाँच्नुहोस्!
12 प्याज सूप बिना विवाह होइन
फ्रान्स मा ग्रीटिंग मा पुरुषहरु बीच एक दृढ र संक्षिप्त हस्ताक्षर र महिला र महिला र पुरुष बीच गाला मा एक चुम्बन समावेश छ। उत्तरार्द्ध स्पेनमा अभिवादन गर्ने तरिकासँग मिल्दोजुल्दो छ तर अर्को गालामा अर्को चुम्बन थपेको छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई केहि प्रश्नहरू कसरी गर्ने भनेर थाहा छ वा फ्रान्सेली भाषामा आधारभूत संवादहरू जब उनीहरू अत्यन्त मूल्यवान हुन्छन् उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्तिले बोल्न प्रयास गर्छन्। थप रूपमा, यो सँधै नयाँ भाषाहरू सिक्न समृद्ध पार्दै छ र फ्रान्स भ्रमण गर्नु यसलाई अभ्यासमा राख्नु राम्रो अवसर हो।
फ्रान्समा टिपिंगले कसरी काम गर्छ? फ्रान्समा ठुलो सल्लाह छोड्न प्रायः चलन नै हुँदैन। अधिकमा, चित्र क्याफेको टेरेसमा गोलाकार हुन्छ वा यदि सेवा राम्रो भएको छ तर थोरै मात्र बाँकी छ तर यो अनिवार्य छैन।
सीधै यसो नगर्नुहोस् कि केहि तपाईंको रुचिमा छैन
कूटनीति फ्रान्सेलीको विशेषता धेरै राम्रो हुन्छ, त्यसैले तपाईले उनीहरुलाई केहि पनि मनपर्दैन कि भनेर सुन्नुहुनेछैन। उदाहरण को लागी, यदि तिनीहरू एक डिश मनपराउँदैनन्, तिनीहरूले मात्र यो भन्दैन, तर उनीहरूले त्यो स्वाद प्रयोग गर्दैनन् वा डिशको विशेष स्वाद छ भनेर उल्लेख गर्दछन्।
भ्रमणको घोषणा गर्नुहोस्
फ्रान्सेलीहरूले औपचारिकता राख्न मन पराउँछन् त्यसैले अचानक अरू कसैको घरमा आउनु अघि उनीहरूले पहिले नै यो घोषणा गर्न रुचाउँदछन्। यदि पाहुना घरमा खाना बनाउँदैछन र खानाको लागि बधाई छ भने पाहुनालाई एक बोतल वाइन सहित प्रस्तुत गर्ने चलन छ।
फ्रान्सको भ्रमण गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ कि खानाको समय के हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ किनकि उनीहरू तपाईंको मूल देशको सन्दर्भमा फरक हुन सक्छ। तिनीहरू प्राय: बिहान breakfast बजे बिहानको खाजा खाउँदछन्, दिउँसो खाना खाउँदछन् र दिउँसो7तिर खाना खानेछन्। तिनीहरू सामान्य रूपमा खानाभन्दा पहिले खाजा तयार गर्दैनन् ताकि स्वाद बिग्रेको नहोस्।
फ्रान्स मा, एक भेट वा बैठक को लागी ढिला हुनु धेरै असभ्य मानिन्छ। तिनीहरू १ard मिनेट र २० मिनेट भन्दा बाहिर अपवाद बनाउँदैनन्।
वरपरका मानिसहरूलाई बाँच्न नदिन फ्रान्सेलीहरू सार्वजनिक ठाउँमा कम आवाजमा बोल्छन्। तिनीहरूले कहिल्यै आफ्नो आवाज उठाउँदैनन्।
अप्रिल १ मा फ्रान्समा यो उत्सव मनाईन्छ le poisson d'avrol (अप्रिल माछा) जुन उसको विशेष अप्रिल फूल दिवस हो। यो पार्टीले कसैलाई ठट्टामा समातेर समात्छ जसमा कसैको पछाडि माछाको सिल्हूट चिपकाउनु पर्दछ, त्यसैले पार्टीको नाम।
पेटानक एउटा खेल हो जुन फ्रान्सको दक्षिणमा सुरु भयो तर समयसँगै स्पेनलगायत धेरै युरोपियन देशहरूमा पनि फैलिएको छ। फ्रेन्चहरू कुनै पनि अवसरमा बोल्स खेल्न मन पराउँछन्, समुद्र किनारमा होस् वा विवाहको बीचमा।
लामो जीवन बाँच्नुहोस्!
क्यान्डलमासका दिन, फेब्रुअरी २, फ्रान्सेलीहरूले स्वादिष्ट क्रेपहरू तयार पारे र प्यानबाट बाहिर उफ्रिन उनीहरूको दाहिने हातले घुम्न बायाँको सिक्का समातेर। यसैले समृद्धि अर्को सालको क्यान्डलमास सम्म ग्यारेन्टी गरिएको छ।
प्याज सूप बिना विवाह होइन
फ्रान्समा विवाह समारोहमा प्याजको सूपको सेवा गर्ने चलन छ, नम्र उत्पत्तिको भाँडो जुन फ्रान्सेली खानामा क्लासिक भयो जब संयोगवश अदालतको सदस्यहरूले पत्ता लगाए। उनको नुस्खा फ्रान्सको नेशनल लाइब्रेरीमा राखिएको १ V औं शताब्दीको पुस्तक, ले वायान्डियरको संस्करणमा देखा पर्दछ।
फ्रान्समा मे १ मा उपत्यकाको लिलीका केही स्प्रिगहरू (मुगुएट) लाई प्रेमको चिह्नका रूपमा दिन र समृद्धिको चाहना गर्ने प्रथा छ। यो पनि वसन्त को आगमन मनाउन एक तरिका हो।
यी फ्रान्स को सबै भन्दा उत्सुक रीतिहरू हुन्। फ्रान्समा रहँदा तपाईंले अरू कुन फ्रान्सेली चलन वा परम्परालाई चिन्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » फ्रान्स » फ्रान्स को भन्सार